UNHCR oo Warbixin ka soo saartay Qaxootiga Soomaaliyeed ee dib u soo noqonaya sanadkaan. – Balcad.com Teyteyleey
Tirada dadka soo laabtay: 2,274 qaxooti Soomaali ah ayaa ku noqday Soomaaliya, Qalabka gargaarka: 697 CRI ayaa loo qaybiyey 543 qoys (2,004 arday),Dib-u-dhiska: 2,941 qof oo dib-u-celin ah oo la bixiyay deeqo dib-u-dhis, Hoyga: 17 hoy iyo 40 musqulo ayaa la dhisay.
Mashaariicda ku saleysan beesha Caalamka: 1.486 ka-faa’iideystayaal ah mashaariic ku salaysan bulshada
UNHCR ayaa Soomaaliya ka bilowdey barnaamijka gargaarka degdegga ah ee loo yaqaan “Spontaneous Returnee (ASR)” oo loogu talagalay in lagu caawiyo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan Yemen si ay ugu noqdaan Soomaaliya. Kuwa soo noqda oo go’aansaday inay noqdaan kuwo iskaa wax u qabso ah ayaa waxay xaq u leeyihiin inay helaan baqshad ballaaran oo soo kabasho ah halka ay ku dambeyn doonaan.
UNHCR Soomaaliya ayaa la kulantay UNHCR Kenya oo ku taala Dhadhaab, oo ku taalla xudduudda Soomaaliya iyo Kenya. Caafimaadka, waxbarashada iyo guryaha ayaa loo aqoonsaday inay yihiin qaybaha ugu muhiimsan ee u baahan habka istaraatijiyadeed ee muddada caawinta ee soo noqoshada. Mas’uuliyiinta Kenya ayaa xaqiijiyay in gawaarida waddooyinka sii wadi doonaan illaa iyo inta laga gaarayo qiimeynta amniga ee la qaban karo.
Koox ka kooban 11 qaxooti Soomaali ah oo ka soo jeeda xerada qaxootiga ee Kakuma (Kenya) ayaa sameeyay afar maalmood oo booqasho ah oo booqo Soomaaliya. Kooxdu waxay arkeen taageerada dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee la soo gaarsiiyay Soomaaliya waxayna dib ugu celisay qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Kakuma si ay awood ugu yeeshaan inay sameystaan ​​go’aan mutadawiciin ah oo lagu ogaanayo ku laabashadooda Soomaaliya.
Qaybaha kama dambaysta ah ee tijaabada hore ee nidaamka kormeerka dib-u-dhiska dib-u-dhiska ayaa la meel dhigay si loo hirgaliyo bisha Oktoobar iyada oo loo marayo wada-hawlgalayaasha wada-hawlgalayaasha. Nidaamka la cusbooneysiiyay ayaa bixin doona xog badan oo loo baahan yahay oo ku saabsan horu-marinta dib-u-noqoshada qaxootiga soo noqoshada, aasaasida saldhig cad oo loogu talagalay UNHCR Somalia si ay u siiso kaalmo dheeri ah, kaalmo ku salaysan si loo taageero dib-u-cusbooneysi waara.
Ilaa 2014, guud ahaan 107,392 qaxooti Soomaali ah ayaa ku soo noqday Soomaaliya; 76,612 oo ka yimid Kenya, 33,154 oo ka yimid Yemen (33,021 spontaneous and 133 assisted) iyo 626 dalal kale oo magangalyo ah.
■ Sebtembar 2017, 2,274 qaxooti Soomaali ah ayaa ku soo laabtay Soomaaliya, 1,509 oo Kenya ah, 532 oo Yemen ah, 232 oo Jabuuti ah iyo mid ka mid ah Eritrea.
The post UNHCR oo Warbixin ka soo saartay Qaxootiga Soomaaliyeed ee dib u soo noqonaya sanadkaan. appeared first on Ilwareed Online.
Dagaal saakay ka dhacay degmada Balcad ee gobalka Sh/Dhexe.